ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page2of 208 - MinSayYar
ရန်ကုန်ကို ဝင်မည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်များ ကိုဗစ်ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှု ဝန်ကြီးချုပ် ကြည့်ရှု
ရန်ကုန်ကို ဝင်မည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်များ ကိုဗစ်ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှု ဝန်ကြီးချုပ် ကြည့်ရှု—————————–အောက်တိုဘာ ၂၅ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များအား မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြံ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အမြန်လမ်း ဇီးရိုးမိုင်တို့ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် Rapid Test Kit ဖြင့် ရောဂါပိုး ရှိ / မရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မင်းလွင်ကုန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ #MyanmaPlatform #News #Domestic ######################## ရန်ကုန်ကို ဝင်မည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်များ ကိုဗစ်ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှု ဝန်ကြီးချုပ် ကြည့်ရှု—————————–အောက်တိုဘာ ၂၅ ရန်ကုန်မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည့် ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်များအား မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြံ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အမြန်လမ်း ဇီးရိုးမိုင်တို့ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် Rapid […]
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၀၀ နီးပါး ရှိသွားပါပြီ (ဒေါက်တာနန္ဒဝင်း)
“ရန်ကုန်ကိုရောက်ခဲ့တယ်” ၁၀၊၁၀၊၂၀၂၀ အရေးပေါ်ချက်ချင်းပဲ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပြောင်းဖို့ အမိန့်ထွက်လာတယ် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ စနစ်ကျနတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ကြားမှာ တတ်စွမ်းသမျှ လိုအပ်ချက်ရှိနိုင်တာလေးတွေ ကို ကြည့်ကာ ဖြည့်စည်းပေါင်းစပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အလုပ်တွေများလွန်းတာမို့ တာဝန်တွေ ခွဲဝေပြီ: ပီပီပြင်ပြင် လုပ်နေတဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလိုတာက ပေါင်းစပ်ညှိုနှိုင်းသူ နေရာစုံလျှောက်သွား လူ အစုံနှင့်တွေ့ လိုတာ ဖြည့်နိုင်ဖြည့် မလုပ်နိုင်တင်ပြ ပေါင်းစပ် ဖြေလျော့ပေးမယ့်သူ…. ဘယ်သူမှတာဝန်မပေးပါပဲ အဲဒီနေရာကို ခုန်ဆင်း တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ မာနကိုခဝါချပြီး လူတိုင်းကို “ကျွန်တော်က အသစ်ရောက်တဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာနန္ဒဝင်း ပါခင်ဗျာ” လို့မိတ်ဆက်ရင်း တစ်သက်တာရဲ့ အချိုသာဆုံးလေသံ အောက်အကျို့ဆုံး အနေအထား နှင့် ပေါင်းစပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရွေ့တစ်ခု ရှိလာတယ်။ အားကိုးသူတွေရှိလာတယ်။ ဘဝရဲ့ စိတ်အပင်ပန်းဆုံးအချိန်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်။ […]
သူရဲကောင်းဟူသည် စစ်မြေပြင်မှာပဲ ပေါ်ထွက်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်… ယမန်နေ့ညက မန္တလေးပုဂံ အမြန်ရထား စက်ခေါင်းအမှတ် DD–1214 နွားထိုးကြီးမြို့မရဲစခန်း၏ အရှေ့ဘက် ၅ မိုင်ခန့်အကွာ ငှက်ပျောအိုင်ကျေးရွာအနီး မြောက်ဖက် တံတားအဝင်မတိုင်မီ မီးရထားမိုင်တိုင်အမှတ် (၃၉၈/၂၀/၂၂) ကြားမှာ နံနက် ၂ နာရီ ၅၅ မိနစ် အချိန်တွင် စက်ခေါင်းခန်း လမ်းချော်သွားခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ စက်ခေါင်းမှူး ဦးအောင်နိုင် မောင်းနှင်လာချိန်တွင် ရထားဘီးချော်သည် ကိုသိသဖြင့် အရှိန်သတ်စဉ် စက်ခေါင်းမှာ သံလမ်းအရှေ့ဘက်သို့ ဦးခေါင်းလည်ကျပြီး တိမ်းမှောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို မတိမ်းမှောက်မီ လက်မတင်အချိန်လေးတွင် လက်ထောက် စက်ခေါင်းမောင်း ကိုကျော်ကျော်ဦး သည် နောက်တွဲများလိုက်ပါ တိမ်းမှောက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် စက်ခေါင်းပေါ်မှ ခုန်ှဆင်းကာ နောက်ဖက် လူစီးတွဲနှင့် […]
ကျွန်တော်ကို ကိုဗစ် Positive လူနာစောင့်လိုက်ချင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လာမေးကြတာတွေရှိပါတယ်။ အရင်ကတော့ လိုက်လို့မရဘူးလို့ပဲသိထားပင်မဲ့ အခု ကိုဗစ် နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြေကြားပေးနေတဲ့ HICA ဆိုတဲ့အဖွဲ့က တင်ထားတာလေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ။ “ကိုဗစ် positive လူနာကို လူနာစောင့်ခွင့် လိုက်ပါနိုင်ရန် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ” 1. အသက် ၁၈ နှစ် နှင့် ၄၅ နှစ်ကြား မည်သည့်ရောဂါအခံမှ မရှိသော ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ ဖြစ်ပြီး လူနာ၏ဆွေမျိုး (သို့မဟုတ်)အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်ရမည်။ 2. လူနာစောင့်နေချိန်အတွင်း မိမိအား ရောဂါကူးစက်နိုင်သော အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသိရှိပြီး မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် လူနာပြုစု စောင့်ရှောက်လိုကြောင်း သဘောတူညီချက် (Informed risk consent) ပေးရမည်။ 3. လူနာအားစောင့်ရှောက်နေစဥ်အတွင်း အနည်းဆုံး Level2PPE […]
ကိုဗစ်မှာ အနံ့ပျောက်တာကို ဟိုဆေး ဒီဆေးသောက်လို့ ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့
ကိုဗစ်မှာ အနံ့ပျောက်တာက တခဏပဲ ဖြစ်တာပါ။ အများစုက ၃-၄ ရက် တစ်ပတ်လောက်နေရင် ပြန်အနံ့ရလာပါတယ်။ ဘာဆေးမှ သောက်နေစရာမလိုပါ။ တချို့က ဟိုဆေး ဒီဆေးသောက်လို့ ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပြီး ဆေးစွမ်းတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အနံ့ပြန်ရတဲ့ဆေးဆိုတာတွေကို သတိထားသုံးပါ။ ဆေးမြီးတိုများကိုလည်း ဥပါဒ် မဖြစ်အောင် သုံးပါ။ ဆေးမသောက်လဲ သူ့အလိုလို အနံ့ပြန်ရပါတယ်။ အစာအာဟာရကို မျှတအောင်စားပြီး အားရှိအောင်နေပါ။ ဖြည့်စွက်စာတွေ အားဆေးတွေသောက်ပါက ပုံမှန်လိုအပ်သလောက်ပဲသောက်ပါ။ အလွန်အကျွံ မသောက်ပါနဲ့။ လူအနည်းငယ်မှာတော့ အနံ့ပျောက်တာ ၃-၄ ပတ်လောက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းစိတ်မပူပါနဲ့။ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ (Med Info)
လူ (၃၀) ဦးထက်ပို၍စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း အစိုးရကြေညာ
လူ (၃၀) ဦးထက်ပို၍စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း အစိုးရကြေညာ လူ (၃၀) ဦးထက်ပို၍စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာ (၂၅) ရက် ညပိုင်း က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ (၈) ရက်နေ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရန် မဲရုံများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့က ညှိနှိုင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းတွေကို ကိုက်ညီစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လူ (၃၀) ဦးထက် ပို၍ စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Zawgyi………. လူ (၃၀) ဦးထက်ပို၍စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုကြောင်း အစိုးရကြေညာ လူ (၃၀) ဦးထက်ပို၍စုဝေးခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာ (၂၅) ရက် ညပိုင်း က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ […]
ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် လူနာ (၃) ဦးပါ လူနာတင်ကား ယာဥ်တိုက်မှုဖြစ်၊ လိုက်ထရပ်မှ အတင်းလုမောင်းဟုဆို
ကိုဗစ် ပေါ့စတစ် လူနာ (၃) ဦးပါ လူနာတင်ကား ယာဥ်တိုက်မှုဖြစ်၊ လိုက်ထရပ်မှ အတင်းလုမောင်းဟုဆို… ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ (၂၅) ရက် ကိုဗစ် – ၁၉ Positive လူနာ (၃)ဦးပါသည့် အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဉ် နှင့် လိုက်ထရပ်ယာဉ်တို့ ယနေ့ အောက်တိုဘာ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ (၅:၂၅) နာရီအချိန် ရန်ကုန် ၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်တွင် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ Positive လူနာ (၃) ဦးပါ ဦးစားပေးယာဉ်ကို လိုက်ထရပ်ယာဉ်က အတင်းလုမောင်းခြင်းကြောင့် ထိုယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းဖြစ်စဉ်းနားတွင် ရှိ‌နေသူတစ်ဦးကပြောပြခဲ့သည်။ ၎င်း ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကိုဗစ်-၁၉ Positive လူနာ (၃)ဦးကို […]
အောင်နိုင်ရေးဆိုပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ လှည့်လည်နေသူတွေအတွက် အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံပါ
ယနေ့ နံနက် မုပွန် ဇီဇဝါလမ်းမှ Positive လူနာ၏ Contact ဆိုပြီး လာခေါ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ် အပြည့်အစုံ… (မှတ်ချက်။ ။ အောင်နိုင်ရေးဆိုပြီး လူစုလူဝေးနဲ့ လှည့်လည်နေသူတွေအတွက် အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံပါ) လူနာ အသစ်ထပ်ထွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ 19.10.2020 ရက်နေ့ မော်လမြိုင်မှ Positive (၃၂)ဦး ထွက်တဲ့ညက ကလေး (၂)ယောက်က Positive ထွက်တယ်။ မိခင်ဖြစ်သူက Negative ထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေး(၂)ဦးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီး မိခင်က ပိုးအကူးခံပြီး လိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း တင်ထားပေးပါတယ်။ အဲဒီညက ကလေးလေးတွေပဲ မိသားစုဝင်တွေထဲကပဲ ဆိုပြီး Contacts tracing ကို သတိမမူ မိလိုက်တာပါ။ အဲဒီ ကလေး (၂)ယောက်နဲ့ မိခင်ကို Isolation […]
“ Fighting U Kyaw Thu” ၊ “ Fighting Tun Ko Ko” ဟု PPE ၀တ်စုံများတွင် ရေးသားကာ ကုသပေးခြင်းအတွက် အင်အားဖြစ်သည်ဟု ဦးကျော်သူဆို
“ Fighting U Kyaw Thu” ၊ “ Fighting Tun Ko Ko” ဟု PPE ၀တ်စုံများတွင် ရေးသားကာ ကုသပေးခြင်းအတွက် အင်အားဖြစ်သည်ဟု ဦးကျော်သူဆို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ဝေဘာဂီကူးစက်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံကြီး၌ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကူးစက်ခံထား ရသော ရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ သရုပ်ဆောင်ဦးကျော်သူနှင့် သရုပ်ဆောင်ထွန်းကိုကို တို့ ကို ဆေးကုသပေးနေသည့် ဆရာ၀န် ဆရာမများက ၄င်းတို့ ၀တ်ဆင်ထားသည့် PPE ၀တ်စုံများတွင် “ Fighting U Kyaw Thu” ၊ “ Fighting Tun Ko Ko”ဟု စာသားများရေးကာ ကုသပေးလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ PPE ၀တ်စုံများတွင် […]
မန်းလေးမှာ ဘယ်သူက စလိုက်လဲ မသိဘူး .. နှင်းတွေများကျနေလား အောင်းမေ့ရလောက်အောင် ထုံးတွေကို လမ်းတွေမှာ ဖြူးကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုဗစ်ပိုး သေအောင်တဲ့။ ကိုဗစ် ပိုး သေတာ မသေတာ အပထား .. ပြသနာက ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ .. အဲဒီထုံးတွေ တက်နင်းလာသမျှ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ ဖိနပ်တွေဟာ .. အိမ်တိုင်းစေ့ ကြမ်းပြင်တိုင်းမှာ ထုံးတွေပေပြီး ပွထနေရော။ နောက် ဒီထုံးဆိုတာ အခမသင့်ရင် microscopic particales ဆန်ဆန် ထုံးအမှုန့်လေးတွေကနေ အခုလို ဆိုးကျိုးတွေ ရနိုင်တယ်။ ၁။ အရေပြားယားယံစေတယ်။ ၂။ ထုံးအမှုန်တွေက ပြင်းလျှင် ပြင်းသလို .. မျက်စိပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ၃။ ရှူရှိုက်မိပါကကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ၄။ သာမာန် ရှုတောင် […]